Zụrụ Allylestrenol ntụ ntụ (432-60-0) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Allylestrenol ntụ ntụ (432-60-0)
Rating: SKU: 432-60-0. Category: Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Allylestrenol ntụ ntụ (432-60-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Allylestrenol ntụ ntụ, aha njirimara Gestanin na Turinal n'etiti ndi ozo, bu ihe omuma nke achoputara na ogbagha nke emere na egwu na imeghari ozo, na igbochi oru aka. Otú ọ dị, ma e wezụga ụbụrụ na-egosi na ọ bụ ezughị ezu, a gaghịzi enye ndụmọdụ dị otú ahụ.
Allylestrenol ntụ ntụ video
Allylestrenol ntụ ntụ isi agwa
aha: Allylestrenol ntụ ntụ
Usoro Molecular: C21H32O
Molekụla arọ: 300.48
Melt Point: 79.5-80 Celsius
agba: White ntụ ntụ
Allylestrenol ntụ ntụ
Chemical aha: Allylestrenol ntụ ntụ
Aha aha: Gestanin na Turinal n'etiti ndị ọzọ, Allylestrenol ntụ ntụ, Gestanin ntụ ntụ, Turinal ntụ ntụ, 432-60-0
Allylestrenol ntụ ntụ Usage
Were Allylestrenol ntụ ntụ (CAS 432-60-0) site na ọnụ dịka a gwara ya, a pụrụ iji ya ma ọ bụ na-enweghị nri. Ị nwere ike ịṅụ ọgwụ a iji gbochie iwe GI. Soro ntuziaka niile na ngwugwu ngwaahịa. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ọ bụla gbasara ozi ahụ, kpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ.
Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ọnọdụ gị na-adịgide ma ọ bụ na-akawanye njọ ma ọ bụ na ị mepụtara mgbaàmà ọhụrụ. Ọ bụrụ na i chere na ị nwere ike ịnweta nsogbu ahụike siri ike, nweta enyemaka ahụike ozugbo.
Allylestrenol ntụ ntụ kacha mma echekwara na ụlọ okpomọkụ pụọ ìhè na mmiri. Iji gbochie ọgwụ ọjọọ, ị gaghị echekwa Allylestrenol ntụ ntụ n'ime ime ụlọ ịwụ ma ọ bụ friza. E nwere ụdị dị iche iche nke Allylestrenol ntụ ntụ nwere ike inwe nchekwa dị iche iche. Ọ dị mkpa mgbe niile ịlele ngwugwu ngwaahịa maka ntụziaka na nchekwa, ma ọ bụ jụọ onye na-ere ọgwụ. Maka nchekwa, ị ga-ahapụ ọgwụ niile na ụmụ na anu ulo.
Ekwesighi igbanye Allylestrenol ntụ ntụ n'okpuru ebe mposi ma ọ bụ wụsa ha n'ime mmiri ma ọ bụrụ na a gwara ha ka ha mee otú ahụ. Ọ dị mkpa ka ị tụfuo ngwaahịa a ozugbo ọ na-agwụ ma ọ bụ na-adịkwaghị mkpa. Gwa onye na-ere ọgwụ gị maka nkọwa ndị ọzọ gbasara otu esi echefu ngwaahịa gị n'enweghị nsogbu.
Gịnị bụ usoro onunu ogwu nke Allylestrenol
ANYỊ GA-EBE ECHICHE NDỊ A GA-EBE EKWUKWU NDỊ NA-EME NA NTỊ
ANYỊ GA-EBE EBE EBE EKWU ỤBỤRỤ NDỊ MGBE Ọ BỤ Ọ BỤ ỌZỌ ỌZỌ
Kedu ihe bụ Allylestrenol ntụ ntụ (Gestanin ntụ) maka onye toworo eto?
Ime ọpụpụ egwu
Okenye: 5 mg okwu ugboro atọ n'ụbọchị maka ụbọchị 5-7.
Kedu ụdị dose Allylestrenol maka nwatakịrị?
Ejighị usoro ọgwụgwọ na-arịa ọrịa ụmụaka. O nwere ike ịbụ ihe nwedịrị ike maka nwa gị. Ọ dị mkpa mgbe niile ịkọwa nchekwa nke ọgwụ ahụ tupu i jiri ya. Biko gwa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike maka ozi ndị ọzọ.
Kedu ka Allylestrenol ntụ ntụ dị?
Allylestrenol ntụ ntụ dị n'ụdị dị iche iche nke na-esonụ:
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na mberede ma ọ bụ nkwụsịtụ?
N'ihe gbasara mberede ma ọ bụ nnyefere, kpọọ ọrụ mberede mpaghara gị ma ọ bụ gaa na ụlọ mberede kacha nso gị.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na enweghi m ọgwụ?
Ọ bụrụ na ị na-atụfu mkpụrụ nke Allylestrenol ntụ ntụ, were ya ngwa ngwa o kwere omume. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge maka ọgwụgwọ ọzọ gị, gbanye ụbụrụ a na-atụghị anya ya ma were oge gị dị ka ndokwa. Ejila okpukpu abụọ.
Ndekọ Ahụike Mba adịghị enye ndụmọdụ ahụike, nyocha ma ọ bụ ọgwụgwọ
Otú Allylestrenol ntụ ntụ si arụ ọrụ
Allylestrenol ntụ ntụ yiri nhazi na ịrụ ọrụ na progesterone. Progesterone na-ekerịta ọrụ ndị na-emepụta ọgwụ na-emepụta nke ndị progestins. Progesterone na-ejikọta progesterone na estrogen anabata. Ngwongwo ndị a na-agụnye gụnyere traktị nke nwanyi, mammary gland, hypothalamus, na pituitary. Ozugbo agbatị na onye nkwụnye ahụ, ndị ọkachamara dị ka Progesterone ga-eme ka ugboro ugboro hapụ ntọhapụ nke gonadotropin na-ahapụ hormone (GnRH) site na hypothalamus ma mee ka LH na-amalite ịmịpụ ọbara (luteinizing hormone). N'ime ndị inyom nwere estrogen zuru oke, progesterone na-agbanwe mgbanwe endometrium ka ọ bụrụ ihe nzuzo. Progesterone dị oké mkpa maka mmepe nke anụ ahụ dị oke mkpa ma dị mkpa iji mee ka endometrial receptivity maka ịkpụpụta nwa ẹmbrayo. Ozugbo esirila nwa ẹmbrayo, mmegharị ahụ na-eme iji nọgide na-enwe afọ ime. Progesterone na-emekwa ka uto nke anụ ahụ alveolar mammary na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka uru ahụ dị mma. O nwere ntakịrị ọrụ estrogenic na androgenic.
Mkpokọta glucuronide na sulze sulfate nke ime n'afọ na imeju na-apụ na urine na bile. Ndị na-emepụta ihe na-emepụta progesterone bụ ndị na-agagharị na bile nwere ike ịmalite imegharị ọgwụ nke interohepatic ma ọ bụ enwere ike ịpụpụ ha na feces. A na-esite na akụrụ na-emepụta ihe ndị na-eme ka ndị na-eme ihe na-aga n'ihu.
Allylestrenol ntụ ntụ na-enye ndị ọrịa ndị tara ahụhụ ọtụtụ nsogbu, ọrụ akaghi aka ma ọ bụ hyperplasia prostate na-abaghị uru. Ọgwụ ọjọọ na-emetụta hormone nke na-ebu maka ntọhapụ nke gonadotropin ma mee ka mgbatị nke hormones ndị na-aga n'ihu na-ebute ngwa ngwa.
Ị ga-agakwuru dọkịta gị ma nyochaa ahụike gị nke ọma banyere ọnọdụ ịtụrụ ime na ọnọdụ ọgwụgwọ ndị ọzọ nwere ike gbochie ime afọ imeju. Ị ghaghị ime ka dọkịta gị mara nsogbu ọ bụla dị ugbu a ma ọ bụ ọrịa ndị ị nwere, ọgwụ ọ bụla nke ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ nri, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị nọ na ọgwụ ọgwụgwọ ọ bụla, ihe oriri ma ọ bụ ọgwụ ọgwụ ndị ọzọ.
Ị ghaghị iji nlezianya nara ọgwụ ahụ na dịka dọkịta gị gwara gị ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-enwe ndidi maka ọrịa shuga, migraine, epilepsy, ụkwara ume ọkụ nwere ọrịa obi, ọrịa akwara ma ọ bụ ọrịa imeju, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-anabataghị glucose.
Enwere ike inwe mmetụta ụfọdụ nke gụnyere vomiting na ọgbụgbọ, isi ọwụwa, anụ ọkụ ahụ dịka rashes, hives, redness, swelling of the throat, tongues, lips, visionless vision and dizziness, nsogbu ụdọ na abdominal pain, constipation or diarrhea, fluctuations ọbara mgbali. Ị ghaghị izere ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ na-apụ apụ n'èzí ugboro ugboro mgbe ị nụsịrị ọgwụ ahụ.
Allylestrenol ntụ ntụ (CAS 432-60-0)
Allylestrenol ntụ ntụ Marketing
Allylestrenol ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
A na-eji ntụ ntụ Allylestrenol mee ihe maka ọgwụgwọ, njikwa, mgbochi, & mmelite nke ọrịa, ọnọdụ na mgbaàmà ndị na-esonụ:
-Dịba afọ ime nwa
-Benye akwa hyperplasia prostatic
- Imeghari ọpụpụ
- Na-ete ime ime
-Intrauterine uto retardation
- Ọrụ na-arụ ọrụ
Enwere ike iji ogbere allylestrenol mee ihe maka ebumnuche ndị a edepụtara na ebe a.
Mmetụta dị na Gestin (Allylestrenol ntụ ntụ) gụnyere ndị edepụtara n'okpuru. Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime nsogbu ndị a nọgidere, ma ọ bụ ka njọ, ị ga-ahụ dọkịta gị ozugbo.
-Ndị obi ụtọ
E kwuwo na ụmụ ọhụrụ ndị nne na-aṅụ ọgwụ a mụrụ nwere ike ịdị elu karịa ike nkịtị, ma echeghị na nke a enweghị nchedo.
Esi esi AASraw zụta Allylestrenol ntụ ntụ
Estradiol Cypionate ntụ ntụ
Estrone ntụ ntụ